I-Villa Gidel - ingadi eseningizimu 300 m ukusuka ogwini - I-Airbnb
I-Villa Gidel - ingadi eseningizimu 300 m ukusuka ogwini
Lion-sur-Mer, Normandie, i-France
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Elsa
Indlu enhle ezimele yaseNorman engamamitha angama-53m2 300 ukusuka olwandle edolobhaneni laseLion sur Mer enengadi encane yangasese ebheke eningizimu. Ilungele ukuchitha impelasonto njengombhangqwana, nabangane noma nezingane. Woza uzojabulela ulwandle, idolobha laseCaen, iThalassos yaseCôte de Nacre, noma uvakashele amabhishi okufika futhi uthole iNormandy. I-Lion sur Mer iyindawo yokungcebeleka ngasolwandle yangekhulunyaka le-19 enebhishi elimnandi elibonakala ngezindlu zayo ezinhle ezingasolwandle.
I yokuhlala has Esitezi lalinomnyango ehlukile, ikhishi sikuhlomele ngokuphelele, ukuziphilisa / udla Igumbi ukuvulwa ungene engadini yangasese nge 1 enezihlalo usofa embhedeni, ikamelo eshaweni (l ukufinyelela eshaweni isizwe ungumthombo ongumngcingo, ibanganyana isikhungo 40cm), ngaphezulu kusuka lokulala ohlangothini engadini nge embhedeni 140, kusukela ekamelweni ohlangothini lomgwaqo nge embhedeni 160. le ndlu ahlomele lolwandle (beach amathawula, parasol, pétanque, ibhola, molky nezinye imidlalo. ..), engadini (ifenisha yasengadini, izoso), eyezingane (umbhede wokuvakasha, isihlalo esiphezulu, umgoqo wokuphepha wezitebhisi, imidlalo). Izincwadi kanye nemibhalo yezivakashi onawo. Umdlalo webhodi. Amakamelo okulala afakwe i-glazing ephindwe kabili.
AMASHIDI kanye namathawula anikeziwe.
Ukuhlanza kufakiwe enanini. Indlu kufanele ishiywe isesimweni esihle sokuhlanzeka kukhishwe amashidi futhi imigqomo ikhishwe.
Useduze nezitolo, izindawo zokudlela, uhambo oluhle ngasolwandle kanye nemisebenzi eminingi yezemidlalo namasiko: iklabhu yomkhumbi, iklabhu yethenisi, icinema, ihhovisi lezivakashi ...
Indlu itholakala imizuzu engama-20 ngemoto ukusuka eCaen, imizuzu engama-30 ukusuka eBayeux, imizuzu engama-45 ukusuka eDeauville naseCabourg. Uma ufika e-Caen ngesitimela, ibhasi eliqondile likuyisa e-Lion sur Mer ngemizuzu engu-45. Indawo yokupaka mahhala eduze kwendawo yokuhlala.
Esimeni sokufika sekwephuzile noma ukuthikamezeka kwethu, isistimu evikelekile ivumela abahambi ukuthi bafike kalula. Ukuhlala endlini engumakhelwane, siyatholakala nganoma yiluphi ulwazi futhi sixoxisane nawe ngesifunda. Uma singekho singathintwa uma kunesidingo.
Sinenja engadini yethu engakwazi ukufinyelela engadini yakho encane enezindonga.
Ingadi ebiyelwe ibheke ingadi yethu yemifino (in permaculture) kanye nengadi yethu enezinkuni.
Ikotishi elithandekayo elinemibhede emibili elifakwe kahle kumamitha angama-300 ngasolwandle edolobhaneni laseLion-sur-Mer. Indawo enhle yekhefu lomndeni noma impelasonto nabangani. Izingane zamukelekile. Ungakwazi ukujabulela ulwandle, ama-thalassos nama-spas ogwini lwase-De Nacre, izinkundla zempi zasebhishi, kanye ne-Normandy yonke. I-Lion-sur-Mer iyindawo yokungcebeleka ngasolwandle kusukela ngekhulu le-19 enolwandle oluhle nezindlu ezinhle zasolwandle.
Indlu inezitezi ezi-2. Esitezi esiphansi, kukhona igumbi lokuhlala / lokudlela (elinombhede wosofa womuntu oyedwa), ishawa (enesango eliwumngcingo), kanye nekhishi elihlome ngokuphelele. Isitezi sokuqala sihlanganisa amagumbi okulala amabili anamafasitela akhanyiswe kabili (umbhede ophindwe kabili we-200 x 140 cm wegumbi lengadi eseceleni kanye nombhede ophindwe kabili ongu-200 x 160 cm wegumbi eliseceleni lomgwaqo). Leli khaya linengadi encane yangasese eseningizimu eveziwe futhi ifakwe nefenisha yangaphandle, izoso, amathoyizi olwandle, i-parasol kanye nombhede wezingane, isihlalo esiphezulu, kanye nesango lezitebhisi lokuphepha lezingane ezincane.
Kunikezwe amashidi namathawula. Ukuhlanza ikhaya kuhlanganisiwe kodwa indlu kufanele ishiywe isesimweni esihle sokuhlanzeka kukhishwe amashidi futhi imigqomo ikhishwe. Esimeni sokufika sekwephuzile noma umnikazi engatholakali, isistimu yezokuphepha ivumela ukufinyelela okuphephile.
Ikhaya liseduze nezitolo, izindawo zokudlela, ihhovisi lezivakashi, icinema, ithenisi namakilabhu okuhamba ngomkhumbi futhi itholakala amaminithi angama-20 ngemoto usuka eCaen, amaminithi angama-30 usuka eBayeux kanye nemizuzu engama-45 usuka eCabourg noma eDeauville. Indawo yokupaka mahhala emgwaqeni. Uma ufika ngesitimela esiteshini sase-Caen, kunebhasi eliqondile lika-Lion-sur-Mer (ubude bohambo: imizuzu engu-45).
Abanikazi bahlala endlini elandelayo nenja. Ziyatholakala kunoma imiphi imibuzo noma izinkathazo.
Lion sur Mer, Normandy, France
Esimeni sokufika sekwephuzile noma ukuthikamezeka kwethu, isistimu evikelekile ivumela abahambi ukuthi bafike kalula. Ukuhlala endlini engumakhelwane, siyatholakala nganoma yiluphi ulwazi futhi uma singekho singathintwa uma kunesidingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lion-sur-Mer namaphethelo